Socket PPR umatshini iwelding
Uluhlu olusebenzayo lwezixhobo zesocket fusion zisetyenziselwa i-PP-R, i-PE, i-PERT, imibhobho yePB kunye nokufakwa. Izinto eziluncedo >> Isikrini esibonisa ngokukodwa sedijithali, ngokombandela ohlukileyo, sinokulungelelanisa ubushushu obuhambelanayo. >> Olunye uhlobo lokuma olususekayo lokuxhasa, ukuwelda kwimikhombandlela emininzi. >> Iseti utsalo abazinikeleyo, elula ukuba basebenzise kwaye baphathe. >> Inkqubo yolawulo okrelekrele ye-elektroniki, inokuqonda imbuyekezo yeqondo lobushushu ngokuzenzekelayo >> Ixesha lokufudumeza sig ...
IHDPE IBHUTI FUSION FITING
Iphepha leDatha yobuGcisa: Umatshini wokusika umbhobho wobuchwephesha, ukusika okuchanekileyo kunye nomsebenzi ochanekileyo. kulula ukuyiphatha. Ubunzima bomatshini uphela yi-7.5 kg. Imodeli engama-220 ingasika imibhobho kuluhlu lwe-15mm ~ 220mm ubukhulu. Ubungakanani bodonga lwemibhobho yentsimbi yi-8mm, ubukhulu bemibhobho yeplastiki yi-12mm, kunye nobunzima bentsimbi engenasici ngu-6mm. Akukho ngxolo kwaye akukho ntlantsi ngexesha lokusika. Indawo yokusika igudile ngaphandle kwe-burrs, indawo yokusebenza ayinakukhubazeka, kwaye isantya sokusika si ...
Isandla seplastikhi sokukhupha
Iphepha leDatha yobuGcisa: Imodeli: I-SDJ3400 Voltage: I-220V Amandla oMbane aShushu: I-1300W iMetabo yamandla oMoya oshushu: I-3400W i-Lesiter Welding Rod yokuFudumeza Amandla: I-800W yevolumu eyongeziweyo: 2.5kg / h Ubungakanani beWelding Rod: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm inokuba Elungiselelweyo Hand extruder umpu idla ngokusetyenziselwa ukuwelda iHDPE, iPP, iPVDF kunye nezinye izinto ezishushu ezinyibilikayo kwiiprojekthi ezinjengeetanki zamanzi zeplastiki, imibhobho yeplastiki, izikhongozeli zeplastiki kunye neeplastiki. Imodeli ye-SDJ3400 Voltage 220V ± 5% yeRhoqo 50 / 60Hz iBlower Air Blower ...
I-Geomembrane Welder SUDG800
Ukusetyenziswa kunye neModeli yoFakelo: I-SUDG800 Voltage: Amandla e-220V / 110V: 800W / 1000W Rhoqo: I-50 / 60Hz i-Welded Material: I-PE / PP / i-PVC / i-EVA / i-ECB yeWelded Material Ukutyeba: ukhetho. I-Copper wedge eshushu kunye ne-iron wedge eshushu ayinyanzelekanga. Ukutshisa okutsha okushiyekileyo kunye nesitshixo esinye esishushu. Iphepha leDatha yobuGcisa: Imodeli SUDG800 Inkcazo yeGeomembrane Welding Machine Voltage 220V (Yenziwe ngentando eyamkelekileyo) Ukuhamba rhoqo kwe-50 / 60hz Power 8 ...
Isicelo kunye neNqaku lomatshini we-Electrofusion welding ulungele ukudibanisa imibhobho ye-PE kunye nokufakelwa ngokudibanisa ezisetyenziselwa ukuhambisa igesi kunye namanzi. 1.Yila kwaye ngokwe-ISO12176 ye-electro-fusion welder standard. Inqanaba eliphezulu le-MCU lisetyenziswa njengombindi wolawulo, lixhotyiswe ngomboniso weLCD, zonke iiparameter zokuwelda zinokuboniswa. Ubunzima bokukhanya, ukusebenza ngokulula. 4.Ngokubeka iliso kwi-weld-real-time status, inkqubo ye-welding engaqhelekanga inokupheliswa ngexesha elifutshane. 5. Yakhelwe ngaphakathi ...
Ukusetyenziswa kunye Nophawu 1.Welding Uhlobo: oxwesileyo weld kunye neqengqo pipe. Inkqubo yolawulo lwepaneli yokulawula ipaneli, ekwaziyo ukuzihlengahlengisa ngokuzenzekelayo ubushushu, ixesha kunye noxinzelelo ngokweeparitha zezinto eziphantsi kokulungiswa. Inkqubo yokulawula i-Nokia Siemens PLC, i-7-intshi yokubamba umbala wescreen-Nokia. Isakhelo esitsha esidibeneyo seBrand-3, indlela ethembekileyo yokuhambisa, ezinzileyo emsebenzini kunye nokugqwesa ...